IHE NWOKE GA-EME, NWANYỊ GA-EME KARIA. – hoo!haa!!
IHE NWOKE GA-EME, NWANYỊ GA-EME KARIA.
SIMINSOLA- ỌKWỌ ỤGBỌ ELU NWANYỊ
Ebe asị na ana-esi n’ulọ mara mma pụta n’ama, ka mụ malite isi okwu m n’ihe na-eme na hoohaa.
Ndi ogbakọ hoohaa na eme ihe asọmmpi itu ilu ugboro atọ kwa izu ụka ọbụla. Na mbụ asọmmpi a na-abụkarị njiri mara ụmụ nwoke.
Mgbe ahụ, ekwe asọmmpi a kụọ, ndi ọkaibe n’ilu dịka Dọkint Uche ejiri Arịrịerimba mara, Dọkinta Achụkọ, Mazị Sai Nwenya, Mazi Ikechukwu Ọjị na ọtụtụ ụmụ nwoke ndi ọzọ awasie ọgọdọ ha ike. Ọ na-abụ ihe nkiri na-enye obi ụtọ ilele ebe ndi a nọ n’ama mpi ilu.
Mgbe ahụ ụmụ nwanyị ụfọdụ na-abata nanị ịbịa nọchịte anya ụmụ nwanyị mana anaghị ele ha anya ịsọta ihe ọbụla na mmpi ahụ…
Mana ugbua, egwu adagharịala! Ụmụ nwoke na-anọzị n’agịga ekiri ụmụ nwanyị ma ekwe asọmmpi ilu ndi hoohaa daa. Ụmụ nwanyị dịka Uju Nwanekezi, Oriakụ Dumebi Ọjị, Ngọzị Nwarụnta na ndi ọzọ dịka ha achụọla ụmụ nwoke ụkwụ eru ala n’asọmmpi ilu hoohaa.
Na mbụ, oge akụkọ ụwa na igwe mgbasa ozi bụ rediyo ruwe nso, onye ọbụla asụsụ igbo na-amasị awụchaa ntị ya nke ọma maka igere olu dịka nke ogene mmadụ dịka Chukwuma Ogbonna, Padi Eke maọbụ Okokon Nedm ji agụpụta akụkọ ụwa nakwa okwu na-eso akụkọ.
Kitakwa egwu adagharịala. Onye nwoke igụzị akụkọ ụwa na rediyo dịzị ka aga-enye ụmụ nwanyị ngarị tupu anata ha ike ime nke a.
Aga-ekwu ole ghara ibe ya! Na mbụ, ihe enwere n’ụlọ akwụkwọ nta dịka onye isi bụ hedimasita, mana kịta ụlọ akwụkwọ nta nwere hedimasita dịka onye osi dịzị ka o na-akụla bandi azụ. Nke na-ewuzị bụ hedimisi maọbụ hediticha ka ọ dị ka ana-eme.
Ọdị mma, na mbụ mbụ, ekwuwe okwu maka ndi dibịa oyibo ejiri dọkinta mara, ihe ị ga na-anụ bụ “nwoke ahụ sịkwa, nwoke ahụ asịghị, mana kịta ọ bụzịghị ya.
N’otu aka ahụ, anyị na-ahụtabu ọrụ ikwọ ugbọelu dịka nanị nke ụmụ nwoke. N’isi nso a, otu nwagbọghọ gosiputara onwe ya dịka onye eji eme ọnụ na ikwọ ụgbọ elu na Naijiria. Nwagbọghọ a aha ya bụ Sinmisola Ajibola siri n’ọdụ ụgbọ elu Legọs kwọrọ nnukwu ụkpọ elu eji ebu ndi njem, B777-300 laa Abụja, ma sikwa Abuja kwọrọ nke eji ebu ngwongwo laa Owere. Ndi otu ọrụ ya niile bụkwa ụmụ nwanyị. Ọ bụ ugbọ elu ndi Air Peace ka nke a mere.
Agụwa ọtụtụ ebe ndi ọzọ ụmụ nwanyị na-akpa ike, ha bara ụba. Mana ka anyị were nanị ndi anyị metụrụ aka ebe a kụpụrụ ụmụ nwanyị anyị aka.
ARỊRỊỌ: Ụmụ nwanyị unu ejikwana aka unu ji akụpụ ụmụ nwoke n’ihe ndi a, kụpụ ha na ime mpụ. Unu mekwa nke a, ụwa emebie n’otu ntabi anya maka na ihe a ga-ekwubezị bụ na “arụ nwoke ga-eme, nwanyị ga-eme karịa”. Biko Chukwu ekwela.
Previous Post: NDI FULANI EBUSOGHỊ ANYỊ AGHA – Kelvin Ochinanwata
Next Post: ILU MAKA ỌKỤ
Maazị Sai, i deka. Ị bụ ọkaibe n’edemede Igbo.
Chineke ga-enyere ụmụnwaanyị aka ka ha bụrụ ejiamaatụ na naanị ihe ọma.
Ee, mana o nweghi ihe ụra mere anya